Ifektri yelaphu | Kwichina Tricot yelaphu Abavelisi, abaxhasi
Indwangu ye-nylon tricot ye-yoga ejikelezayo
Inkcazo Le nylon tricot ilaphu, inqaku lethu lenombolo FTT20620, yenziwa nge-100% i-40 ye-denier nylon yomsonto oqaqambileyo. Inobubanzi boomatshini ububanzi kodwa ayoluli ngobude. Ilaphu le-nylon tricot elikhanyayo elingu-intshi ezingama-intshi elibizwa ngokuba yi-silk hammock okanye ilaphu le-yoga swing. Yinto ebonakalayo yelaphu yeyoga yasemoyeni ebizwa ngokuba yi-anti-gravity yoga. Eli laphu lenylon tricot liqinile kwaye lomelele ngokwaneleyo ukuba ...
Inayiloni spandex buthuntu indlela ezine zoluko lwetriki
Inkcazo Le ntsimbi ye-nylon spandex elula ye-tricot, inombolo yethu ye-FTTG101001, yenziwe kwi-80% ye-40 ye-denier engavaliyo kunye ne-20% ye-spandex 40 ye-denier. Eli laphu libonisa ukubonakala buthuntu kwe-sheeny. Yindlela ezine ezoluliweyo, emtyibilizi neyomeleleyo ilaphu le-tricot. Le nylon (i-polyamide) i-spandex (elastane) yelinen eyoluliweyo inokuchacha okuqinileyo. Iya kubuyela kwimeko yayo yoqobo kwaye inike ukuxhathisa. Ngenxa yayo ...
I-nylon spandex ekhazimlayo ye-tricot yelaphu
Inkcazo Le ngubo ekhanyayo ye-nylon spandex tricot, inombolo yethu yenqaku FTTG10103, yenziwe nge-81% 40 denier shiny shiny kunye ne-19% spandex 40 denier. Eli laphu libonakala ngokukhazimla kwe-sheeny. Yindlela ezine ezoluliweyo, emtyibilizi neyomeleleyo ilaphu le-tricot. Le nylon (i-polyamide) i-spandex (elastane) yelinen eyoluliweyo inokuchacha okuqinileyo. Iya kubuyela kwimeko yayo yoqobo kwaye inike ukuxhathisa. Ngenxa yayo ...
I-nylon spandex matte yeendlela ezine zokolula ilaphu le-tricot
Inkcazo ye-nylon spandex elula ye-tricot fabric, inombolo yethu ye-FTTG101021, yenziwe nge-82% ye-nylon semi-dull 40 denier kunye ne-18% spandex 40 denier. Eli laphu liqaqambisa ukukhanya (matte). Yindlela ezine ezolulekileyo nezomeleleyo zelitric. Le nylon (polyamide) i-spandex (elastane) yelinen eyomeleleyo iyamelana ngokuqinileyo kwaye ivumela ilaphu ukuba ligcine ubume balo. Ngenxa yenkqubo yayo yokuluka kunye nesakhiwo esinithiweyo, inayiloni s ...